Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị na-egwu egwuregwu bọọlụ Spanish David De Gea Child Story Plus Ihe omuma ihe omuma
LB na-egosi Full Story of a Football Stopper kasị mara aha na aha njirimara; 'Edwin Van De Gea'. Anyị David De Gea Child Akụkọ ya na enweghị akwụkwọ akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge.
Nyocha nke onye nlekọta na-ahụ maka ihe mgbe ochie na-agụnye akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya na ọtụtụ nkwụsị na ON-Pitch amachaghị banyere ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ikike ya mana ole na ole na-atụle David De Gea Biography Akụkọ nke na-adọrọ mmasị. Ugbu a na-enweghị n'ihu adieu, hapụ Amalite.
Akụkọ David De Gea - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
David de Gea Quintana mụrụ na 7th ụbọchị November 1990 na Madrid, Spen site José De Gea (nna), onye na-elekọta ihe mgbaru ọsọ na Marivi Quintana (nne), onye na-elekọta ụlọ.
A mụrụ ya mgbe nne na nna ya gbara afọ iri anọ na ụma ma bụrụ naanị otu nwa nke ezinụlọ ya.
Ndị nne na nna ya bara ọgaranya na-azụlite David De Gea, ọ bụghị nanị na ọ kpasuru nwa ha iwe, ma nye ya ihe ọ bụla ọ chọrọ dị ka nwa ha.
David dị ka nwatakịrị nwere mmasị dị ukwuu maka egwuregwu. Otú ọ dị, nne na nna ya, karịsịa nne ya, lekọtara anya banyere nguzozi dị mma n'etiti ọmụmụ na egwuregwu.
Ha kwere ya ka ọ bido ọrụ football ya na otu n'ime ụlọ akwụkwọ ntorobịa kachasị mma nke Spanish maka ekele maka ọnọdụ ego bara ụba.
David De Gea Biography Eziokwu - Mmalite Ọrụ:
Ọ malitere na La Escuela De Futbol Atletico Casarrubuelos - ndị mmekọ na Atletico Madrid. Cruz, bụ onye nkụzi bọọlụ ochie ya, mere ka ọtụtụ ihe David De Gea hụrụ n'anya ga-esiri ike ikwere.
O kwuru, sị, "Ọtụtụ afọ n'ime ọrụ ntorobịa ya, David bụ onye ọkpụkpọ zuru oke na-apụ apụ ruo mgbe ọ dị afọ 14 tupu ọ gbanwee ka ọ bụrụ onye na-elekọta ihe mgbaru ọsọ." Oh ee, ị nwetara ya nri !! Ọ dịghị mgbe ọ bụ onye na-elekọta ihe nchebe site na mmalite.
N'ebe a, ọ bụ naanị 6 na-acha ntutu isi na-egbuke egbuke na-ese foto ya na ndị otu ya.
David gwakwara ndị otu ụlọ akwụkwọ ya oge ụfọdụ ọ dị mkpa. Onye Spaniard dị na foto dị n'okpuru ebe a gosipụtara àgwà ọma dị ka onye na-eto eto na onye ọkpụkpọ na-aba uru n'oge ọ bụ nwata.
Gerard Pique Childhood Story Plus Na-adịghị Echiche Eziokwu Akụkọ
Mgbe ọ dị mkpa, ọ nwere ike igwu egwu niile ọnọdụ (nchekwa, etiti na ọgụ). David nọgidere na-abụ onye ọkpụkpọ n'èzí ruo mgbe 14 dị, afọ nke kọwara oge mgbanwe na ọrụ ya.
Akụkọ David De Gea - Dbọchị Ọrụ Oge.
Ogologo ya na-eto eto 6 na 4 na-ejedebe ọsọ ọsọ ya dịka ndị ịgba egwu. N'ịchọsi ike ịgbaso nzọụkwụ nna ya, David kpebiri ịgbanwe ka ọ bụrụ onye na-elekọta ihe mgbaru ọsọ maka ndụ. Dika idebe ihe mgbaru ọsọ, David sonyekwara na basketball ebe o jiri ogologo ya di elu.
De Gea guzobere ọkwá ya dị ka onye na-eche nche oge niile site na afọ iri na anọ. O so n'òtù ndị meriri ọtụtụ mmeri nke ndị ntorobịa na Spain. A na-ese onyinyo ụlọ egwu na De Gea na-eto eto n'okpuru.
Cabinetlọ na-eto eto na De Gea, La Escuela De Futbol Atletico Casarrubuelos.
David De Gea ndi otu ndi ntorobịa.
Ozugbo onye na-eche nche na-eto eto dị njikere maka nnukwu challanges, a gwara ya ka o sonyere ndị otu egwuregwu Atletico Madrid. N'ihi nnukwu onyinye ya De Gea bịanyere aka na nkwekọrịta ọkachamara mgbe ọ dị afọ 17.
Na 2011 David natara onyinye na-adọrọ adọrọ na onye ọ bụla nwere nkà, na-agbasi mbọ ike ka mma, na-atụ anya na ọrụ ya. Manchester United ghọrọ ụlọ ọgbakọ David ọ bịanyere aka na ya ogologo oge.
De Gea gbanwere akụkọ ifo Edwin van der Sar mgbe ọ lara ezumike nká. Nnukwu ọrụ ya na klọb dugara aha 'Edwin Van De Gea '. Ndị ọzọ dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Ndụ David De Gea:
Ezigbo ezinụlọ David De Gea kwesịrị ịma. N'ozuzu, o si n'ụlọ bara ọgaranya nke ndị na-elekọta ihe mgbaru ọsọ. Nna ya, Jose De Gea bụ onye na-eche nche maka Getafe mara maka nnukwu nchekwa.
Ọ bụ otu n'ime ndị na-echekwa ihe mgbaru ọsọ mbụ ewepụtara na Getafe mgbe ha guzobere na oge 1983-84. Ma nna ma nwa nwoke biri ma kuo ume ka ọ bụrụ ihe mgbaru ọsọ.
ose, papa ya, bụ onye nchịkwa ya kacha mma n'ihi na ọ na-achọsi ike. Na Atletico, ọ nọ na egwuregwu ọ bụla kamakwa ọzụzụ ọ bụla na mmiri ozuzo, ifufe ma ọ bụ snow.
Mama David De Gea, Marivi Quintana abụwo onye na-elekọta ụlọ n'oge ndụ ya niile. Echetara ya maka ilekọta di ya na naanị nwa / nwa. Marivi Quintana bụ onye na-akwado 'ịha nhata n'etiti agụmakwụkwọ na egwuregwu'. Nke a ka ọ chọrọ maka nwa ya nwoke.
Dị ka a hụrụ na foto dị n'okpuru ebe a, nne na nna anọworị na 60. Ha nwere nwa ha nwoke na 40. Ha abụọ bi na Toledo, obodo na obodo Central Spain.
Ebe obibi David De Gea.
David ama eti ini kiet;
"Mama m ga-akpọ, abụọ, atọ, ugboro anọ n'izu. Ọ na-ekwukarị na ọ na-echegbu m nke ukwuu. Ọ na-echegbu onwe ya mgbe niile banyere nhazi ọmụmụ m na egwuregwu.
Ndị mụrụ m ga-ebugharị 50km kwa ụbọchị ka ha bịa lelee m anya na Atletico ọzụzụ na mpaghara nke Alarcon.
N'ozuzu, nkwado nke nne na nna ya enyere aka na ọrụ ya. Ọrụ ha na-arụ bụ ihe doro anya n'etiti ezigbo ndị enyi ha maara ha.
Ọnye na-bụ Edurne García Almagro? David De Gea hụrụ:
David De Gea alughi di na nwunye dika odide. E kwuru na Spanard nọ na mmekọrịta dị ogologo oge Edurne García Almagro bụ onye 5 afọ karịa ya.
Edurne, bụ onye na - abụ abụ Spanish, onye na - eme ihe nkiri, na onye na - eme ihe onyonyo nke amara maka ịga nyocha mmekọrịta ọha na eze kemgbe ọ bụ nwata.
Mgbe ọ dị afọ 9, ọ ghọrọ onye so na otu ndị egwu egwu ụmụaka Spanish Trastos. O biliri n'ebube 2005 mgbe ọ na-ekere òkè na ntinye ngosi Spanish na-egosi Operación Triunfo ma gwụchaa na ebe isii n'ime 2006.
Ha abughi di na nwunye ma ma eleghị anya ha na-eche maka ya n'ọdịnihu. Onye ọ bụla maara ha na-ahụ ha dịka di na nwunye zuru okè. David De Gea amaghi nwa agbọghọ ọ bụla na ndụ ya ma e wezụga Edurne. Dị ka ya si kwuo;
“Mụ na David nwere nnọọ obi ụtọ ọnụ. Anọ m ya mgbe niile n'agbanyeghị na ejikọtara ya na ebumnuche idebe. Ọ ka chọtara m ezigbo oge. ”
Dehụnanya David De Gea na Edurne.
David na Edurne na-agakarị oriri na ọ sportsụ sportsụ na egwuregwu dị iche iche ọnụ. N'ezie, nwanyị nwere ike ịkọ ma nwoke hụrụ ya n'anya ogologo oge ọ dị njikere itinye ego.
Nye David, ego ndị ejiri Edurne enweghị isi. Obu oge ejiri ghara onu ahia.
David De Gea na - ewepụta ezigbo oge yana enyi nwanyị Edurne.
Radamel Falcao, Juan Mata, Antoine Griezmann na Robert Lewandowski enweela akụkọ ịhụnanya yiri David De Gea.
David De Gea Anya ezughị oke:
David de Gea nwere hyperopia, nke pụtara okwu mgbasa ozi maka ịdị ogologo. Nke a bụ ụdị mmezigharị na-adịkarị ebe enwere ike ịhụ ihe ndị dị anya karịa nke dị nso.
Onye Spaniards na-etinye ihe igwe egwu site na ndụ ya ma na-ekiri oghere kọntaktị
Anya David De Gea Anya - Ihe kpatara o ji etinye lens kọntaktị.
Okwesiri ọrụ ya emetụbeghị ọnọdụ ya.
David De Gea Biography Eziokwu - Nnukwu Onye Nnọchiteanya Ya:
Jorge Paulo Agostinho Mendes (amụrụ 7 Jenụwarị 1966), nke amara nke ọma dịka Jorge Mendes bụ onye nnọchi anya David De Gea.
Onye nnọchiteanya David De Gea- Jorgie Mendes.
Mendes bụ otu n'ime ndị na-enwetakarị ndị uwe ojii n'ụwa, ndị ahịa tinyere Cristiano Ronaldo, David de Gea, Diego Costa, James Rodríguez, na José Mourinho.
A na-akpọkarị Mendes dị ka "nnukwu ụlọ ọrụ". O nwere ndị 102 ndị ọzọ na-agba bọọlụ dịka ndị ahịa wee nwee nkwekọrịta nkwekọrịta ruru ọnụego $ 1.
David De Gea Biography - Cargbọ ala ya:
David De Gea na-anya ụgbọ elu Captiva - SUV nke Chevrolet ($ 50.000) rụpụtara.
N'adịghị Raheem Sterling, ọ dịghị eji ya n'ụgbọala, otu maka ụbọchị ọ bụla n'izu. David bụ nwoke dị mfe nke na-enwe ezigbo ntụsara ahụ ya Chevrolet Captiva.
Davidlọ David De Gea:
Davidlọ David De Gea dị ọnụ ahịa na 2.75 XNUMXm. A na-ekpughe foto n'okpuru.
David De Gea Biography Eziokwu - Enyi Ya Kasị Ochie:
Enyi kasị ochie nke David abụghị onye ọzọ Kun Aguero.
Mkpakọrịta enyi David De Gea na Kun Aguero.
Ọ na-eme nke ọma Kun n'oge ha nọ na Athletico Madrid. Ha abụọ mekọrọ ọnụ ọnụ n'oge ahụ. Ọ bụghị n'ihi na ha anaghị azụ ụlọ dị iche iche, kama ọ bụ n'ihi ezigbo ọbụbụenyi ha keere n'etiti onwe ha.
David De Gea Enyi kachasị okenye.
Mgbe ahụ na Athletico, Mgbe Devid jidere cross, mmuo mbụ ya ga-aga ngwa ngwa ma ọ bụ tụfuo Kun pụọ karịa onye ọ bụla n'ime ndị òtù ya na-achọ ịma.
Eziokwu nke David De Gea:
A makwaara Devid maka ihe edozi edozi ya.
David De Gea Hairdị ntutu.
Inwe ntutu kpamkpam ekpuchi si n'akụkụ ọ bụla bụ ihe na-enwetakarị na Manchester United fans niile ekele David De Gea. Ọ dị ka ala karịa na nke Pọl Pogba dị ka Manchester United akwado n'okpuru na-atụ aro.
Manchester United Fan Na-edegharị Ude nke David De Gea.